कसको तलब कति पुग्यो? मुख्य सचिवको ६९४८२, आइजीको ६४७२६, मावि शिक्षकको ५६८५४ – MySansar
कसको तलब कति पुग्यो? मुख्य सचिवको ६९४८२, आइजीको ६४७२६, मावि शिक्षकको ५६८५४
Posted on August 4, 2019 by Salokya
यसपालिको बजेटले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढाएको घोषणा गरे पनि कसको तलब ठ्याक्कै कति पुग्यो भन्ने निश्चित भइसकेको थिएन। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने तलबमान स्वीकृत गरेको छ। आज त्यो सार्वजनिक भएको छ। यस अनुसार मुख्य सचिवको कूल तलब ६९ हजार ४८२ रुपैयाँ पुगेको छ। आइजीको तलब ६४ हजार ७२६ हुनेछ भने मावि शिक्षकले अब कूल ५६ हजार ८५४ रुपैयाँ पाउने छन्। कसको तलब कति पुग्यो, हेर्नुस् सूची।
3 thoughts on “कसको तलब कति पुग्यो? मुख्य सचिवको ६९४८२, आइजीको ६४७२६, मावि शिक्षकको ५६८५४”
घुस लिन्या र दिन्या त दुवै देशका सतुर हुन् नि । यो दुवैलाई त मार्‍या पनि कुनै खतबात लाग्न्या छैन रेन्त ।
रित नपुगेका काम छिटो छरितो गराउनको लागि आफै घुस दिने अनि दिनेले दिएपछि लिनेले लिदैन त ? दुवै जना बराबर अपराधी हो ।
तलब पनि यति धेरै फेरि पनि घुस माग्छन कसरि सक्नु हौ हामी जनता ले
सरकारले समान तहका निजामति कर्मचारी, सेना र प्रहरीको तलब स्केल तथा ग्रेड संख्यामा भेदभाव गरेको देखियो । पेशाको हिसाबले जोखिम तथा २४ घण्टा डिउटी गर्नु पर्ने सेना र प्रहरीको तलब दैनिक ७ घण्टामात्र डिउटी गर्ने त्यसमा पनि हाजिर गरेर टाप कस्ने निजामति कर्मचारीहरुको भन्दा तलबस्केल तथा ग्रेडसंख्या थोरै दिएर अन्याय गरेको देखिन्छ । पेशाको हिसाबले बन्द, हड्तार र जुलुस गर्न पाँउदैनन र यिनिहरुले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैनन् भनेर हेपेको जस्तो लाग्यो फौजी दाजुभाईहरुलाई ।